Abaanduulihii ciidamada milatariga ee xilka laga qaaday oo beeniyay in uu goostay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAbaanduulihii ciidamada milatariga ee xilka laga qaaday oo beeniyay in uu goostay
Abaanduulihii ciidamada milatariga ee xilka laga qaaday oo beeniyay in uu goostay
August 19, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Cabdullaahi Cali Caanood. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Abaanduulaha ciidamada milatariga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa beeniyay in uu ciidamo la goostay.
Cabdullaahi Cali Caanood oo wareysi siiyay laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in aysan jirin wararka sheegaya in uu cidamo la goostay, isaga oo intaas ku daray in uu xilka wareejin doono marka uu dhammaado hawlgal uu sheegay in uu hadda ku jiro.
Caanood ayaa hoggaaminaya ciidamo badan oo ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo maalmihii u dambeeyay ay dagaal kula galeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Maalmihii u dambeeyay, waxaa soo baxayay warar sheegaya in uu jiro khilaaf u dhaxeeya abaanduulaha iyo dowladda kadib markii madaxweynuhu uu xilka ka qaaday.
Agoosto 16-keedii, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku shaandheyn ku sameeyay haayadaha amniga, Caanood ayaa kamid ah saraakiisha ciidamada xilka waayay, waxaana booskiisa loo magacaabay Odawaa Yuusuf Raage.
February 9, 2018 358 qof oo ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay Puntland sanadkii 2017
Mogadishu-(Puntland Mirror) The leaders of Somalia’s federal government and regional states are expected to hold their meeting in Mogadishu for the first time since President Mohamed Abdullahi Faramajo was elected in February this year, sources [...]